နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ မာလာရှမ်း‌‌ကောကို အားရပါးရဝေဖန်လိုက်တဲ့ Master Chef ဒိုင် ဒေါ်ဖြူဖြူတင်.. – Myanmar Update News
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ မာလာရှမ်း‌‌ကောကို အားရပါးရဝေဖန်လိုက်တဲ့ Master Chef ဒိုင် ဒေါ်ဖြူဖြူတင်..
Up To Date | July 20, 2020 | Celebrities | No Comments
Master Chef ပြိုင်ပွဲကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်ရာမှာ အထူး နာမည်ကြီး တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သလို ဒိုင်လူကြီးများ ဟာလည်း စည်းစနစ်ကြီးလှပြီး အသေးစိတ်
ကြည့်ရှူ စစ်ဆေးရာမှာ ထူးချွန်ကြသူတွေဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီး သားဖြစ်မှာပါ။ သ ရုပ်ဆောင် နန်းခင်ဇေယျာ ကတော့ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလမှာ မာလာရှမ်းကော ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး Master Chef ရဲ့
ဒိုင်လူကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူတင် ကို အင်တာဗျုး အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံရာမှာ သူမရဲ့ မာလာရှမ်းကောကို Judge လုပ်ခိုင်းခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလို Judge လုပ်ခိုင်းခဲ့ရာ မှာတော့ Master Chef ဒိုင်လူကြီး
ဒေါ်ဖြူဖြူတင်က နန်းခင်ရဲ့ မာလာရှမ်းကော ကို အားရပါးရဝေဖန်လာခဲ့တာပါ။ နန်းခင်ရဲ့ မာလာရှမ်းကောကို အရမ်း အစပ် လွန်ကဲတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအရ မကြိုက်ဘူးလို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမအနေနဲ့ အစပ်လွန်ကဲ တာတွေ စားလေ့ရှိသူတွေကိုပါ ဘာအရသာ ရလို့ စားတာလဲလို့ မေး ခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးအရ အရသာ တစ်ခုကို လွန်လွန်ကဲကဲ ထည့်ထားတဲ့ အစားအစာ တွေကို မစားသင့် ကြောင့်လည်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ မာလာရှမ်းကော ကိုတော့ သူမသမီး ဖြစ်သူတွေက ကြိုက်ကြပြီး Packaging နဲ့ ပြင်ဆင်ပုံ မှာယူရန် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကောင်းမွန်တယ်လို့ ချီးကျူး သွားခဲ့ပါတယ်။နန်းခင်ဇေယျာကလည်း သူမအနေနဲ့
ဒေါ်ဖြူဖြူတင်နဲ့ ခင်မင်နေတာ ကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လက်ဆောင် ပို့ပေးရာမှာ Feedback ကောင်းရဖို့ မမျှော်လင့်ရဲ တဲ့အကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်ဖြူဖြူတင်က ဆိုင်ဖွင့်ရန်အ စီစဉ်ရှိနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာအတွက်
အကြံဉာဏ် ကောင်းတစ်ချို့ပေးလာခဲ့ပြီး New Covid စတိုင်အနေနဲ့ Online Delivery စတိုင်အနေနဲ့ ဇောက်ချပြီး လုပ်ကိုင်သင့် တယ်လို့အ ကြံပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဒေါ်ဖြူဖြူတင်ရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို
သဘောတူကြရဲ့လား။?? ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို Comment မှာရေးထားခဲ့ကြပါအုန်းနော်
(unicode version) နနျးခငျဇယြောရဲ့ မာလာရှမျး‌‌ကောကို အားရပါးရဝဖေနျလိုကျတဲ့ Master Chef ဒိုငျ ဒျေါဖွူဖွူတငျ..
Master Chef ပွိုငျပှဲကတော့ ပွိုငျပှဲဝငျတှကေို ပဈြပဈြနှဈနှဈ ဝဖေနျရာမှာ အထူး နာမညျကွီး တဲ့ ပွိုငျပှဲတဈခု ဖွဈသလို ဒိုငျလူကွီးမြား ဟာလညျး စညျးစနဈကွီးလှပွီး အသေးစိတျ
ကွညျ့ရှူ စဈဆေးရာမှာ ထူးခြှနျကွသူတှဆေိုတာ ပရိသတျကွီးလညျး သိရှိပွီး သားဖွဈမှာပါ။ သ ရုပျဆောငျ နနျးခငျဇယြော ကတော့ ကိုဗဈ ၁၉ ကာလမှာ မာလာရှမျးကော ရောငျးခနြတောဖွဈပွီး Master Chef ရဲ့
ဒိုငျလူကွီး တဈဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါဖွူဖွူတငျ ကို အငျတာဗြုး အစီအစဉျ တဈခုမှာ တှဆေုံ့ရာမှာ သူမရဲ့ မာလာရှမျးကောကို Judge လုပျခိုငျးခဲ့ တယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီလို Judge လုပျခိုငျးခဲ့ရာ မှာတော့ Master Chef ဒိုငျလူကွီး
ဒျေါဖွူဖွူတငျက နနျးခငျရဲ့ မာလာရှမျးကော ကို အားရပါးရဝဖေနျလာခဲ့တာပါ။ နနျးခငျရဲ့ မာလာရှမျးကောကို အရမျး အစပျ လှနျကဲတယျလို့ ခံစားရတဲ့အတှကျ ကနျြးမာရေးအရ မကွိုကျဘူးလို့ ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူမအနနေဲ့ အစပျလှနျကဲ တာတှေ စားလရှေိ့သူတှကေိုပါ ဘာအရသာ ရလို့ စားတာလဲလို့ မေး ခှနျးထုတျခဲ့ပွီး ကနျြးမာရေးအရ အရသာ တဈခုကို လှနျလှနျကဲကဲ ထညျ့ထားတဲ့ အစားအစာ တှကေို မစားသငျ့ ကွောငျ့လညျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
နနျးခငျဇယြောရဲ့ မာလာရှမျးကော ကိုတော့ သူမသမီး ဖွဈသူတှကေ ကွိုကျကွပွီး Packaging နဲ့ ပွငျဆငျပုံ မှာယူရနျ ဝနျဆောငျမှုတှေ ကောငျးမှနျတယျလို့ ခြီးကြူး သှားခဲ့ပါတယျ။နနျးခငျဇယြောကလညျး သူမအနနေဲ့
ဒျေါဖွူဖွူတငျနဲ့ ခငျမငျနတော ကွာပွီ ဖွဈပမေယျ့ လကျဆောငျ ပို့ပေးရာမှာ Feedback ကောငျးရဖို့ မမြှျောလငျ့ရဲ တဲ့အကွောငျးကို ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒျေါဖွူဖွူတငျက ဆိုငျဖှငျ့ရနျအ စီစဉျရှိနတေဲ့ နနျးခငျဇယြောအတှကျ
အကွံဉာဏျ ကောငျးတဈခြို့ပေးလာခဲ့ပွီး New Covid စတိုငျအနနေဲ့ Online Delivery စတိုငျအနနေဲ့ ဇောကျခပြွီး လုပျကိုငျသငျ့ တယျလို့အ ကွံပေး ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ဒျေါဖွူဖွူတငျရဲ့ ဝဖေနျခကျြတှကေို
သဘောတူကွရဲ့လား။?? ကိုယျ့ရဲ့ထငျမွငျခကျြလေးတှကေို Comment မှာရေးထားခဲ့ကွပါအုနျးနော
အားရပါးရဝဖေနျလိုကျတဲ့ Master Chef မှ ဒျေါဖွူဖွူတငျ
နနျးခငျဇယြောရဲ့ မာလာရှမျး‌‌ကောကို အားရပါးရဝဖေနျလိုကျတဲ့ Master Chef မှ ဒျေါဖွူဖွူတငျ#Marry #CeleNews #NanKhinZayYar
Posted by Marry Myanmar on Thursday, July 16, 2020